Jacayl: Martin Vrijland
Abeesada, Kundalini, Xaawa, jacaylka iyo iftiinka
Filed in Jacaylka	by Martin Vrijland	on 6 January 2016	• 11 Comments
Si aad u fahamto maqaalkan waxa faa'iido leh in aad leedahay aqoon diimeed. Tusaale ahaan, waxaa muhiim ah in la ogaado sheekada abuurista Kitaabka Qudduuska ah. Sheekada Aadan iyo Xaawo waxay halkan ku yimaadaan iftiin gebi ahaanba ah waxayna u muuqataa in ay ka badan yihiin khabiir diineed [...]
Jacayl, qadarka mugdiga ah ee asalka ah ee ilaha rabbaaniga ah
Filed in Jacaylka	by Martin Vrijland	on 9 April 2015	• 7 Comments
Waxaa jira qoraallo dhowr ah oo Kitaabka Quduuska ah. Waa ururinta buugaag kuwaas oo dad badan oo hadda ay bilaabeen inay ogaadaan in aan taas barbar dhigi karno warka maanta; iyadoo macnaheedu yahay in dhammaan wararkayaga ay go'aamiyaan wakaaladaha waaweyn ee wararka. Sidaa daraadeed buugaagta Kitaabka Qudduuska ah waxaa lagu dhajiyay xayndaab awood leh. Dabcan [...]
Farxad, cabsi iyo xiriirka jacaylka
Filed in Jacaylka	by Martin Vrijland	on 4 April 2015	• 3 Comments
Dadku waxay u muuqdaan inay raadinayaan farxad, laakiin marwalba waxay u muuqdaan kuwo aan kalsooni lahayn. Haddii aynu kufirno dhegaheenna, waxaan dareemaynaa farxad leh, laakiin cabsida ah in luminaayo taasi waa mid sii kordheysa. Haddii aan helno kaliya lacag badan oo ka iibsan kara gaari fiican, ka dib [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.343.563